रामेछाप नगरपालिकाभित्र एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार हुन दिन्नः नगर प्रमुख थापामगर « Ramechhap News
रामेछाप नगरपालिकाभित्र एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार हुन दिन्नः नगर प्रमुख थापामगर
रामेछापमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेर काम सुरु गरेका छन् । वीस बर्षपछि घर आँगनमा नै अधिकार सम्पन्न स्थानीय जनप्रतिनिधि पाउदा जनता दंग छन् । जनप्रतिनिधि मार्फत अब विकास र समृद्धिले गति लिने आशा र अपेक्षा जनताले गरेका छन् ।
रामेछापको ८ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरेका छन् । रामेछाप नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका नरबहादुर थापा मगरले पनि कार्यभार सम्हाल्दै रामेछाप नगरपालिकालाई नमूना बनाएर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो पाँच बर्षको कार्यकालभरी एक रुपैयाँ पनि नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिने घोषणा गरेको छन् । यसै विषयमा निर्वाचनमा जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता, आगामी दिनमा नगरपालिकाको विकास गर्ने योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर रामेछाप नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरबहादुर थापामगरसँग रामेछाप न्युजले गरेको कुराकानीः–
नगर प्रमुख बन्न सफल हुनुभयो अब रामेछाप नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने तपाईको के योजना छ ?
–जनताको विश्वासमा म रामेछाप नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा विजयी भए । सबै भन्दा पहिला त मलाई विश्वास गरेर मतदात गर्ने जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । लामो समयदेखि राजनीतिलाई नै कर्म बनाएको कारण मलाई जनताले विश्वास गरे । अब मैले निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै काम गर्छु । नगरपालिकालाई नमूना गरपालिकाको रुपमा विकास गर्न गुरु योजना नै निर्माण गरेर काम गर्छु । अब त्यसको लागि तत्काल काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग धन्दा स्थापना लगायतका आधारभुत क्षेत्रमा पहिलो चरणमा काम अगाडि बढाउछु ।
निर्वाचनको गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहुन्छ ?
–निर्वाचनको क्रममा मैले नपुग्ने आश्वासन जनता समक्ष बाडेको छैन् । रामेछाप नगरपालिका रामेछापको पुरानो सदरमुकाम पनि हो । प्राकृतिक स्रोध साधनमा धनी भएर पनि यस क्षेत्रको सही ढंगले उपयोग हुन सकेको छैन् । रामेछाप नगरपालिकाका बासिन्दालाई धनी बनाउने भनेको लिखु खोलामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजना नै हो । अब लिखुको पानीबाटै धनी बनाउने योजना अगाडि सारिने छ । लिखु खोलामा सञ्चालन हुने सबै जलविद्युत आयोजनामा सबै रामेछाप नगरपालिकाका जनतालाई सेयर हाल्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिन्छ । उद्योग स्थापना गरेर रोजगारीको सृजना गर्छु । जसको कारण राजेगारी र यहाँका बासिन्दाको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरेको छु ।
कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने के योजना ल्याउनु हुन्छ ?
–नेपाल कृषि प्रधान देश हो । रामेछाप नगरपालिकाभित्र पनि धेरै मानिस कृषि पेशामा नै आश्रित छन् । अब परम्परगत रुपमा होइन । आधुनिक ढंगबाट कृषि पेशालाई परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छु । नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने जुनार खेती, अनार खेती लगायतका फलफुल खेतीलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गरी योजना अगाडि सादै कार्यान्वयमा लैजाने सोच बनाएको छु ।
सडक निर्माण भएपनि राम्रो सडक नहुँदा जनताले हैरानी खेप्दै आएका छ नि ?
–नगरपालिकाको सबै टोलटोलमा सडक पुग्छ । केही पग्न बाँकी रहेको क्षेत्रमा सडक पुर्याउन मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । अब निर्माण भएका सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । दुई बर्षपछि अब जनताले मलाई सडक चाहियो भनेर माग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्छु ।
नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या पनि धेरै छ,के सोच्नु भएको छ ?
–हो, नगरपालिकाभित्र खानेपानीको समस्या निकै जटिल देखिदै गएको छ । अब लिखु खोला र सुनकोसीबाट लिफ्ट सिस्टम मार्फत खानेपानी ल्याउने योजना बनाइएको छ । केही योजना अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । अब थप योजना पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
–अब आश्वासन र भाषणले मात्र जनताले पत्याउने अवस्था छैन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि जनताालई आश्वासन बाँडन पनि हुँदैन । गर्न नसकिने कामको घोषणा गरेर मात्र पनि हुँदैन । बोलेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेर देखाउनु पर्छ । मेरो कार्यालयभरी नगरपालिकाभित्र एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार हुन दिन्न । मेरो पार्टी होस चाहे अन्य पार्टीको होस । भ्रष्टाचार गरेको पाए कारवाही गर्छु । सुशासन र पारदर्शिता मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणको बारेमा सबै जनताले थाहा पाउने गरी काम अगाडि बढाउछु । नगरपालिकाभित्र कुनै पनि प्रकारको अनियमितता हुने दिने छैन् । जनताको काम सहज रुपमा गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । नगरपालिकाभित्र हुने काममा जनतालाई कुनै दुःख र झन्झट दिइने छैन् । मेरो पाँच बर्षको अवधिमा जनताको सेवा र रामेछाप नगरपालिकाको विकासमा लगाउछु ।